Waa maxay sababta 777 loogu talagalay P3D V4?
Su'aal Waa maxay sababta 777 loogu talagalay P3D V4?
1 sano 2 bilood ka hor #894 by Josh13215
Ilaa imminka aan awoodin in aan helo 777 shaqo oo loogu talagalay P3D V4. Ama waxay noqon doontaa 'wax muuqaal ah lama heli karo' ama ma taageeri doono P3D V4. Ma jiraa qof heysta 777 oo shaqeynaya V4?
Waad ku mahadsantahay hormarinta dhalinyarada
1 sano 2 bilood ka hor #896 by Gh0stRider203
Tan waxaa la daboolay dhowr jeer ka hor. Qaar badan oo ka mid ah duulimaadyadu ma shaqayn doonaan P3D V4 maadaama aanay qorsheeynin, weli. halkan waa lamabucyada aan helo ...
1 sano 2 bilood ka hor #899 by Josh13215
Waad ku mahadsan tahay Rider
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.337